Indawo yokuhlala ye-den yendalo - Kwindawo yendalo - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ye-den yendalo - Kwindawo yendalo
Dodun Rajputan, Himachal Pradesh, India
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguAnnu
Ukuba ukhangela indawo engabhatalelwayo yeCOVID, kufuneka utyelele apha. Le ndawo ikufutshane nendalo ibe ithe cwaka kakhulu ebusuku. Ikufutshane nezinye iindawo ezingokomoya ezifana neTempile yaseKaleshwar Mahadev ngaselunxwemeni lomlambo iBeas kunye netempile yeJawalamukhi ekumgama weekhilomitha eziyi-15 ukusuka kule ndawo. Le ndawo ikufutshane neekhilomitha eziyi-3 ukusuka kwisitrato esiyintloko seSizwe kwaye idityaniswe kakhulu neziko lezothutho. Unokuyonwabela iholide yakho ngaphandle kokuphazamiseka kwaye uzive ngathi usekhaya kwaye ukhuselekile kakhulu.
Uza kwamkelwa ngumakhwekhwetha womkhosi waseIndiya, owayesakuba nguRomando nomfazi wakhe.
Le ndlu isemaphandleni yindawo efanelekileyo yokuphumla kubahambi abatyelela iJawala Ji, iChintpurni, neBaglamukhi; iholide yempela-veki ephithizelayo kwabo bagcina ishedyuli exakekileyo, kunye neendawo zokuhlala ixesha elide zokuloba, iintaka, abakhweli beentaba kunye nabathandi bendalo. Kwakhona, eyona ndawo ifanelekileyo yabantu abafuna ukuya kwindawo epholileyo yokufunda, yokuphanda nomsebenzi usekhaya.
Indlu esemaphandleni, enobugcisa obukhethekileyo kunye nemibala, ikwisakhiwo esiphithizelayo esiyi-2 Kanal. Indlu esemaphandleni esemgangathweni, inomyalelo ongaphendulwanga (ikhadi leposi lefoto!) kufutshane kakhulu nomlambo iBeas kunye nedolophu yaseNadaun, kunye neentaba iGauladhar ezihamba ngasemva.
le ndlu ilungele abo banqwenela ukutyelela iindawo ezininzi kwisithili saseKangra njengeDharamshala, iPalampur, iKangra, iNagrota Surian, iBaijnath. Iindwendwe zethu zinokwenza uhambo losuku oluya kwezi ndawo zingasentla zize zibuyele kwindawo etofotofo nefudumeleyo yokubuka iindwendwe ebusuku, ngenxa yoko ziphephe ubunzima bokubhukisha indawo yokuhlala ehotele kwiindawo ezininzi.
Iindwendwe ziza kukwazi ukungena kuwo wonke umgangatho wokuqala nakwindawo ephakamileyo. Yonke indawo ejikelezileyo ineegadi zemifuno, iifama zeziqhamo.
Kukho iyunivesithi yaseSanskrit ekufutshane enesikolo sale mihla.
Idolophana enembali yaseGarli & Paragpur ekufutshane yilali yookho bakho.
Iindwendwe zethu zinekhitshi elisetyenziswa nangabanye abantu, njengoko singabantu abangayityiyo inyama, sisenokwenza amalungiselelo okupheka ngaphandle kwemifuno, nceda uqaphele ukuba izitya zingenziwa lundwendwe ngokwalo. Sinokubonelela ngokutya okuphekwe ekhaya (i-veg kuphela) ngemali eyongezelelweyo. Izidlo ziphekwa kusetyenziswa ifama, imifuno ephilayo.
Isondele kakhulu kwindalo ngoko unokuthanda izinto eziluhlaza ezijikeleze le ndawo kunye nezinye izinto ezibangel 'umdla.
Umbuki zindwendwe ngu- Annu
As an Airbnb host, I am always available to assist my guests in planning their stay and ensuring their time in our home not only meets their needs but that it’s as comfortable and enjoyable as possible.
Unokuziva ukhuselekile kwaye siza kuba khona ukukunceda xa kuyimfuneko.